Waxa ay Qoysasku uga Baahan yihiin in ay ka Ogaadaan Codsashada Dugsiyada Katooligga ah | Boston School Finder
Waxyaabaha Qoysasku uga Baahan yihiin in ay ka Ogaadaan Codsashada Dugsiyada Kaatooligga
Waxaanu la hadalnay Dr. Peter F. Folan, Madaxweynaha Catholic Memorial School; Claire Cassidy, Maamulaha Saint John School; iyo Elaine Fazekas, Agaasimaha Xiriirka iyo Suuq gaynta Ursuline Academy si aad wax badan uga ogaato waxa ay tahay in qoysasku ogaadaan xulashooyinkooda dugsiga Katooligga h gudaha Boston.
Waa maxay sababta ay tahay in qoysaska Boston ay caruurtooda ugula fakaraan waxbarashada dugsiga Katooligga ah?
FOLAN: dugsiyada Katooligga ah waxay bixiyaan barnaamijyo waxbarasho oo adag, waxbarid ikhtiraac leh, waxbarasho gacanta laga qabanayo, xeeldheeri xagga caqiidada ah taasoo badalaysa qalbiga iyo maskaxda ardayga.
CASSIDY: Manhaj xooggan oo adag oo leh fasalada oo dhan, kaasoo fasal baaxaddiisu yar tahay taasoo u ogolaanaysa ardayda in ay fursado badan u helaan macalimiinta si ay ula falgalaan shakhsi ahaan iyo in badan. Waxbarashada diinta ah waxay sidoo kale u ogolaanaysaa canugga in uu cilmi ahaan u koro uuna wax badan ka fahmo Diintiisa asaga oo helaya tilmaamo toos ah iyo xaadiridda jamaacooyinka.
FAZEKAS: Qoysaska Boston waa in ay kula fakaraan waxbarashada dugsiyada Katooligga caruurtooda tiro sababo ah dartood. Ugu horayn, dugsiyada Katooliggu waxay taariikh ahaan u bixin jireen khibrad waxbarasho oo adag taasoo markastaba la socota dadaalka Katooliggu ku bixiyo diinta iyo sababta. Ursuline, 100% oo ardayada kamid ah ayaa loo ogolaaday koleej afar sano ah, ayada oo qaar badan oo kamid ah ay xaadiraan koleejyada iyo jaamacadaha ugu wanaagsan wadanka. Marka xigta, xaadiridda dugsi xididdo ku leh diinta waxa ay ardayda siinaysaa in uu si xeeldheer u qiimeeyo ujeedadad nolosha uuna ku daro dareen xilkasnimo iyo dhiiranaan ah si uu uga gudbo caqabadaha nolosha. Marka seddexaad, aragtida dugsiga Katooliggu waxay muhiimad siinaysaa jacaylka qofku u qabo dariskiisa iyo baaqa Masiixiyadda ee ah in dadka kale la caawiyo. Ursuline dhexdeeda, waxaanu ka dhabaynaynaa baaqaan anaga oo ku dhaqmayna U adeegis, hal ku dhigga dugsiga.
Wax nooga sheeg dugsigaaga.
FOLAN: Catholic Memorial waa dugsi wiilasha loogu tala galay wuxuuna bixiyaa fasalada 7 ilaa 12. Dugsigeenu waxa uu ardaydiisa u diyaariyaa aduun ay ka buuxaan caqabado aan la ogayn, hubanti la`aan, iyo dhibaatooyin isku murugsan. Waxaanu ardayda yada barnaa in ay aqbalaan kala duwaanshaha, u fakaraan si adag hal abuurna leh, ay waydiiyaan su`aalaha muhiimka ah, si fasiix ahna dadka ula xiriiraan.
Fahmidda qiimaha xiriirka, ardayda yadu waxay u shaqeeyaan dhammaan bulshooyinka leh naxariista iyo jacaylka. Anaga oo ah dugsi fahmaya wiilasha, waxaan samaynaa waxbarashada gacmaha laga qabto, waxaan xalinaa dhibaatooyinka dhabta ah ee aduunka, waxaan sare u qaadnaa akhlaaqda aqbalaadda, iyo in aan siino kalsoonida ay ku noolaan lahaayeen noloshooda dhabta ah.
CASSIDY: Saint John School waa Prek loo maro dugsiga fasalka 8aad kuna yaala bartamaha North End. Wax ka badan 126 sano waxaan u shaqaynay qoysas ka socda wax ka badan 25 bulsho anaga oo siinay manhaj adag. Waxaanu nahay dugsi ay Diinta iyo Wanaagga Waxbarashadu ku kulmaan manhaj adag.
FAZEKAS: Ursuline Academy waa dugsi Katoolig oo madax banaan oo loogu tala galay dumarka da`yarta ah ee kujira fasalada 7-12, kaasoo ku yaala Dedham, MA, markii daqiiqado kaliya laga socdo West Roxbury iyo Roslindale. Manhajka yaga dhammaystiran waxa uu xaqiijinayaa in dhammaan ardaydu ay noqon doonaan qoraa yaal xooggan, hadal jeediyeyaal wax gudbin kara, iyo mufakiriin wax falanqeeya; inta badan koorsooyinka la bixiyo waa heerka sare ama kasii sareysa. Ayada oo ay u fududaynayaan deegaan dhiirigalinaya iyo diin iyo taageerada aan kala go`a lahayn ee macalimiintooda, ardaydu waxay ku soo baxayaan in ay noqdaan haween leh qiyam kuwaas oo bulshadooda kala shaqeeya ujeeddada iyo joogtada.
Asaga oo qiyaas ahaantii leh 380 arday, Ursuline waxa uu ku filan yahay in uu la tartamo ardayda, waliba waxay ku qaadanaysaa wax yar in uu barto ayaga—wuxuuna leeyahay lacagta waxbarashada oo kala bar ka yar qaar kamid ah dugsiyada madaxa banaan, waxbarashada Ursuline oo ah mid qiimo ahaan aad uga weyn kharashkeeda.
Ma inaad diinta Katooligga haysataa si aad u dhigato dugsiga Katooligga ah?
FOLAN: Dugsiyadeenu waxay had iyo jeer yihiin, siina ahaanayaan kuwo ku soo dhaweeya ardayda haysata dhammaan diimaha dhaqanka caqliga u saaxiibka ah ee Katooligga. Dhaqanka caqliga u saaxiibka ah ee Katooliggu waxa uu soo dhaweynayaa diinta iyo sababta wuxuuna waxkasta ka raacayaa runta. Ardayda Katooligga waxaa lagu dhiirigalinayaa in ay soo dhaweeyaan hufnaanta nolosha dugsigooda dhexdiisa iyo tan ka baxsanba.
Ayaga oo isticmaalaya hindisaha yaga adeegga iyo cabirada caddaaladda bulshada, dugsiyada Katooliggu waxay had iyo jeer kusoo dhaweeyaan dadka da`yarta ah su`aalo waaweyn oo ku saabsan diinta iyo waxbarashada bulshada Katooligga. Marka ardayda yadu ay la kulmaan lana falgalaan si toos ah xubnaha la gacan bidixeeyo ee bulshada noloshooda iyo aragtida dunidaba waa la balaarinayaa ayada oo la abuurayo fursado wax lagala soo baxo qalbiga sida dhabta ah jacaylka iyo naxariistu ugu jirto. Qaabkaan, ardayda yada waxaa loo arkayaa in ay u olaolaynayaan isbadal dhanka hanaanka ah oo loogu tala galay wanaag badan oo qofkasta uu helo.
Sidee ayuu hanaanka aqbalaadda iyo codsiga dugsiyada Katooliggu u egyahay?
FOLAN: Dugsi kasta waxa uu sameeyaa hanaan uu ku helayo faham buuxa oo uu ka helo awoodda arday kasta iyo meelaha qofku horumar ka samayn karo. Talooyinka, fasalada, qoraalada, wareysiyada, iyo tijaabintu waxay dhammaantood qayb ka yihiin hanaanka qiimaynta loo isticmaalayo go`aaminta awoodda codsadaha. Helitaanka faham buuxa waxa uu lagama maarmaan u yahay qoyska iyo dugsiga labadoodaba.
CASSIDY: Qoysaska danaynaya codsiga waa in ay bookhdaan websaytka yaga soona degsadaan codsi. Caadiyan dadka intooda badan waxay codsadaan inta u dhexaysa Oktoobar ilaa Maarso. Wax kharash ah ma lahan codsiga dugsiga yagu. Marka qoysasku buuxiyaan codsigooda waxay u baahanayaan in ay keenaan nuqul ah warqadda dhalashada canuggooda, dhammaan natiijadii hore ee waxbarashada, oo ay kujirto xog diyaarsan oo tijaabo ah.
FAZEKAS: Hanaanka codsiga dugsiyada Katooliggu waa uu u kala duwan yahay. Marka la joogo Ursuline, wakhtiga kama danbaysta ah ee codsiga ee caadiga ah waa xagaaga, laakiin codsiyada waxaa loo tixgaliyaa kuwo sanadka oo dhan wareega haddii boos banaan yahay. Waxaanu bogga yaga codsiga u isticmaalnaa hanaan loo yaqaano Ravenna. Marka qoysasku ay samaystaan ayna diyaarsadaan ciwaankooda codsiga, Ravenna waxa uu kugu hagayaa talaabo kasta oo hanaanka codsiga ah, laga bilaabo gudbinta dhibcaha tijaabada soo galista, warbixinada ka imaanay ardayga iyo waalidka, natiijooyinkii hore, iyo diyaarsiga wareysi lala yeelanayo xubin kamid ah shaqaalaha aqbalaadda. Qiimaha codsiga Ursuline waa $50 waxaana jira ka dhaafid xagga qiimaha ah.
Ardaydu ma u baahan yihiin in ay qaataan tijaabo ama imtixaan gaar ah si ay usoo galaan dugsiga Katooligga?
FAZEKAS: Dugsi kasta oo Katoolig ah waxa uu leeyahay shuruudihiisa u gaarka ah ee tijaabada soo galista. Waxaa laguula talinayaa in aad bookhato websaytka dugsi kasta si aad u ogaato waxa ay yihiin tijaabooyinka soo galista ee la isaga baahan yahay. Shuruudda tijaabadu waxaa laga yaabaa in sidoo kale ay ku kala duwan tahay heerka fasalka. Guud ahaan, tijaabooyin ku barbarasho ah ayaa laga helaa shirkado badan oo xagga tijaabada ah. Tijaabo kasta waxay leedahay qiime kaasoo sidoo kale kala duwan. Ka dhaafista qiimaha ayaa la heli karaa waxaadna ku heli kartaa in aad la xiriirto dugsiga aad codsanayso.
Majirtaa kaalmo dhaqaale oo daboolaysa kharashka waxbarashada dugsiga Katooligga ah?
FOLAN:Dugsi kasta waxaa uu ka shaqeeyaa in uu bixiyo fursado dhaqaale iyo helitaanka waxbarasho weyn asaga oo aan u fiirinayn awoodda qofku ku bixin karo lacagta. Dugsi kasta waxa uu isticmaalaa madal onleen ah ama hanaan soo aruuriya dukumiintiyada dhaqaalaha khuseeya, kuwo ugu muhiimsa ayaa ah canshuur celinta taasoo keenaysa faham buuxa oo ku saabsan awoodda dhaqaale ee qoyska.
CASSIDY: Qoysasku waa in ay tagaan Saint John School sanad buuxa kahor inta aysan codsan kaalmo dhaqaale. Waxay kaalmada ku codsan karaan ayaka oo isticmaalaya FACTS ama Catholic Schools Foundation.
FAZEKAS: Marka la joogo Ursuline, waxaanu u baahan nahay in codsiga kaalmada dhaqaalaha lagu buuxiyo FACTS.com. Kaalmada dhaqaalaha waxaa lagu qaybiyaa ayada oo lagu salaynayo baahida dhaqaalaha. Si loo buuxiyo codsiga kaalmada dhaqaalaha, waalidiintu waxay u baahnaan doonaan in ay keenaan W2 iyo 1040 dukumiintiyada.
Haddii canuggu qabo IEP, ma tagi karaan dugsi Katoolig ah?
FOLAN: Haa. Dugsiyada Katooliggu waxay bixiyaan heerar tayo sare leh oo ah howlo waxbarasho taasoo soo dhaweynaysa ardayda leh qaababka waxbarasho ee kala duwan. Ayada oo dugsiyada aysan waajib ku ahayn in ay buuxiyaan nooc kasta oo ah IEP waxay ku dadaali doonaan in ay bixiyaan qaabilaad maangal ah ayaka oo isticmaalaya barnaamijyadooda waxbarasho markasta oo macquul ah.
Dugsiyada Katooliggu ma bixiyaan adeegyada taageerada barashada luuqadda Ingiriiska, sida baridda luuqadda ee wada socota ama tilmaamaha kala soocan?
Adeegyada taageerada barashada luuqadda Ingiriisku waa ay u kala duwan tahay dugsiyada; dhammaan saddexda hogaamiye aan la hadalnayba waxay ku taliyeen in aad la xiriirto dugsi kasta si aad u ogaato waxa uu yahay adeegga uu bixiyo.
Ma waajib ayay kugu tahay in aad ku nooshahay magaalada, degmada, ama xaafadaha halkaasoo dugsiga Katooliggu uu ku yaalo si aad u xaadirto dugsigaas?
FOLAN: dugsiyada Katooliggu waxay leeyihiin deegaan kala duwan taasoo wax weyn ku daraysa jirka ardayga. Dugsiyada Katooliggu waxay ku faanaan siinta ardayda fursado ka imaanaya magaalooyin kala duwansi ay u helaan marin ay ku helaan barnaamijkooda waxbarashada sare. Majiraan shuruudo degenaansho oo looga baahan yahay tagista dugsiga Katooligga.
CASSIDY: Marka la joogo St. John’s, waxaan isaga imaanaa in ka badan 25 bulsho oo degen gudaha iyo hareeraha magaalada Boston.
FAZEKAS: Marka la joogo Ursuline Academy, ardayda yadu waxay ka yimaadaan qiyaas ahaantii 50 magaalo oo kala duwan iyo bulshooyin.
Gadiidka ma la siiyaa dugsiyada Katooligga?
FAZEKAS: Dugsiyada Katooliggu waxay caadiyan ka bixiyaan raaciista gaadiidka goobo khaas ah. Kharashka iyo helitaanku waa mid u kala duwan dugsiyada.
Sidee dugsiyada Katooliggu ula tacaamuleen COVID-19? Ma waxay bixiyaan qaabaka waxbarashada ee fasalka la tagayo, tan ayada oo aan fasalka la tagin la dhigto, ama tan isku dhafan?
FOLAN: Dugsiyada Katooliggu waxay waddada u fureen bixinta waxbarashada fasalka la tagayo, tan isku dhafan, iyo tan ayada oo aan fasalka la tagayn la dhigto laga bilaabo bilowgii cudurka safmarka ah. Anaga oo ahAnaga oo ah shabakad, waxaanu ku faanaa in aan nahay kuwo ku degdega lana qabsada in ay sida ugu wanaagsan ugu adeegaan baahiyaha ardayda yada iyo qoysaskooda. Waxaan meelmarinay heer sare caadigaan cusub waxaana meelmarin doonaa mar labaad caadiga xiga.
CASSIDY: Waxaan rajaynaynaa in dhaqamada aan meel dhignay xiligaan, si aan bulshada dugsiga yaga uga dhigno kuwo badqaba ay sii jiri doonto ilaa Xagaaga 2021. Waxaana kamid ah gacmo dhaqasho joogto ah, ayada oo la isticmaalayo gacmo nadiifiye, kala fogaanshaha dadka iyo xirashada maaskaraha. Intaas waxaa dheer, dhammaan caruurta xanuunsan waxaa waajib ku ah in ay guriga joogaan lana baaro dhammaan caruurtuna waa in la baaro marka ay banaanka ugu baxayaan safar gobolka ka baxsan. Waxaan leenahay barnaamij waxbarashada xagga internet-ka ah (eLearning) oo diyaar u ah dhammaan ardayda aan ka qayb gali karin waxbarashada fasalka la xaadirayo ama kuwo u baahan in la karantiilo.
FAZEKAS: Laga bilaabo Janaayo 2021, Ursuline Academy waxa uu siinayaa qaabka waxbarashada isku dhafan, ardayda dugsiga tagta laba maalmood todobaadkii. Ardaydu waxay dooran karaan qaabka aan fasalka la tagayn oo dhammaystiran hadday sidaa inay sameeyaan ay u baahdaan. Dugsiyada Katooligga, oo uu kujiro Ursuline, waxay raacayaan talooyinka saraakiisha caafimaadka ee khuseeya hanaanka COVID. Xirashada maaskaraha iyo kala fogaanshaha ayaa laga dhaqangalinayaa dhammaan dugsiga maalinkii la dhigto, ardayduna waa in ay buuxiyaan su`aalaha hubinta caafimaadka ee maalinlaha ah.
Si aad wax badan uga ogaato mid kasta oo kamid ah dugsiyadaan kujira qoraalkaan, bookho bogagga Baraha Dugsiyadooda ee hoose:
Dugsiga Catholic Memorial
Dugsiga Saint John